जीवन प्रतिकाे दृष्टिकाेणमा परिवर्तन ल्याउने NLP कक्षा फागुन १ देखि सञ्चालन हुँदै-Setoghar
जीवन प्रतिकाे दृष्टिकाेणमा परिवर्तन ल्याउने NLP कक्षा फागुन १ देखि सञ्चालन हुँदै
सार्इकाेलाेजिकल हिलिङ एण्ड मेडिटेसन सेन्टरकाे अायाेजनामा काठमाडाैंमा NLP कक्षा सञ्चालन गरिने भएकाे छ । NLP मा सहभागि हुन चाहने व्यक्तिहरूकाे निम्ति नाम दर्ता शुरू भएकाे अाकाशा हिलरका अभियन्ता केशव थापाले बताउनुभएकाे छ ।
फागुन १ देखि शुरू हुने उक्त कक्षा १५ दिन सम्म चल्नेछ । कक्षा लैनचाैर स्थित निष्ट कलेजमा सञ्चालन गरिनेछ । व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासकाे अलावा स्वास्थ्यकाे लागि समेत उक्त कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
जीवन र जगतलार्इ नजिकबाट बुझ्नकाे लागि याे कार्यक्रमले निकै प्रभावकारी भूमीका निर्वाह गर्नेछ । सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूले उक्त कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्नेछन् । अाफू् संलग्न क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरू र अाफूलार्इ नजिकबाट बुझ्न चाहने व्यक्तिहरू लक्षित याे कार्यक्रम पहिलाे चरणमा नेपालका प्रतिष्ठित विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न (बैंक, सहकारी, विद्यालय, निजी व्यवसाय, शिक्षा, खेलकुद लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न) करिब २० जना व्यक्तिहरू संलग्न हुँदैछन् ।
यस कार्यक्रममा सहभागि हुनकाे निम्ति पहिलाे चरणकाे लागि विशेष छुट सहित २० हजार रूपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएकाे छ। उक्त विशेष तालिम फागुन १ देखि विहान ६.३० देखि ९.३० सम्म सञ्चालन गरिनेछ ।
के हाे NLP ?
एनएलपीकाे पूरा रूप न्युराे लिङ्गिस्टिक प्राेग्रामिङ हुन्छ । यसकाे नेपाली अर्थ मस्तिष्कले गर्ने भाषिक कार्यक्रम भन्ने हुन्छ । यसमा ३ अाेटा शब्दहरू संलग्न छन् मष्तिष्क, भाषा र कार्यक्रम । हाम्राे मानवीय मष्तिस्कले कसरी काम गर्छ ? यस क्रममा भाषाकाे कस्ताे भूमीका रहन्छ ? मस्तिष्कले दिने संकेतले हाम्राे शरीरले गर्ने कार्य र व्यवहारमा कस्ताे प्रभाव पर्छ ? भन्ने लगायतका विषयवस्तुहरूमा वास्तविक र गहन प्रस्तुती रहने उक्त कार्यक्रम प्रनि अहिले विश्वभर नै चासाे बढ्दै गएकाे छ । नेपालमा पनि यस कार्यक्रम प्रति धेरैकाे चासाे छ ।
किन लिने NLP कक्षा ?
सार्इकाेलाेजिकल हिलिङ एण्ड मेडिटेसन सेन्टरबाट सञ्चालनमा अाउन लागेकाे उक्त कार्यक्रमले व्यक्तिकाे व्यक्तित्व विकास, क्षमता अभिवृद्दि, छिटाे निर्णय लिन सहजता लगायतमा महत्वपूर्ण सहयाेग मिल्नेछ । मानसिक चिन्ताबाट मानिसलाइ मुक्त बनार्इ जीवनलार्इ सुखी, खुसी र सन्तुष्टिकाे अलावा स्वस्थ र नयाँ उर्जा विकासकाे निम्ति समेत याे कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण छ ।
याे कार्यक्रममा १ पटक संलग्न भइसकेपछि जीवनलार्इ नै नयाँ दिशामा डाेहाेर्याउन सकिने भएकाे कारण अाफ्नाे जीवन र जीवनप्रतिकाे दृष्टिकाेणमा परिवर्तन चाहने व्यक्तिहरू यस कार्यक्रममा संलग्न भर्इ लाभ लिन समेत केशव थापाले अाग्रह गर्नुभएकाे छ ।